सरकारी अस्पताल जानुस ज्यान घर आउदैन, निजी अस्पताल जानुस आउदा घर रहँदैन – Ramailo Sandesh
काठमाडौ । सरकारी अस्पताल जानुस ज्यान घर आउदैन, निजी अस्पताल जानुस आउदा घर रहँदैन यो स्लोगन अहिले सामाजिक सञ्जालमा खुबै चर्चित छ । यही स्लोगन हामीले किन टिप्यौँ भने चर्चित पत्रकार रोहित दाहालले यही स्लोगन टिपेर सामाजिक सञ्जालमा लेखे “भोगेकोले हो कि मन छोयो” ।उनीपनि भर्खरै मात्र कोरोना भाइरस संक्रमित भएका थिए । त्यसपछि काठमाडौको धुम्बराहीस्थित ह्याम्स अस्पताल र काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) को उपचारका लागि भर्ना हुँदा लिने कोठाको शुल्क मात्रको एक–एक सूची बाहिरियो ।
त्यसमा एक दिनको नै ५० हजार भन्दा माथी शुल्क त्योपनि कोठाको शुल्क मात्र तोकिएको सूची अहिले सामाजिक सञ्जालमा खुबै भाइरल छ । कोठाको शुल्क मात्र यति छ भने उपचार गर्दा कति खर्च लाग्ला ? हामी भन्छौ नी ।ह्याम्समा एउटा रुमको एकै रातको ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ । उक्त अस्पतालले ७ हजारदेखि ५० हजारसम्म एकै रुमको लिएको र त्यसरी लिएवापत कतै उजुरबाजुर नगर्ने भन्ने कागज समेत गराउने गरेको पाइएको छ ।त्यहाँ उपचार गर्ने विरामीलाई प्रशासनले सिंगो मन्त्रालय हाम्रो हातमा छ, तपाईहरु जहीँसुकै गएर उजुरबाजुर गर्नुस् भनी उल्टै चेतवानी दिने गरेको पीडितहरुले सुनाएका छन् ।
‘किन यति धेरै पैसा ? भनी प्रश्न गर्दा विरामीको उपचार ठूलो कुरा हो । धेरै कुरा नगर्नुस् । मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि सचिव सबै हाम्रै हातमा हुन् भन्दै तर्साइयो,’ एक पीडितले गुनासो गरे ।
बाहिर आएको सूचीमा ह्याम्स अस्पतालले जनरल बेडको लागि प्रतिबेड प्रतिदिन ७ हजार रुपैयाँ, ट्विन शेयरिङ्ग रुमको लागि १५ हजार, प्राइभेट रुमको लागि २१ हजार, डिलक्स रुमको लागि २७ हजार र स्विट रुमको लागि एक दिनको ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।त्यस्तै गरी आइसियु बेडको चार्ज २२ हजार तोकिएको छ । यो बेडको मात्र मूल्य हो । अन्य औषधि, डाइग्नोसिस, नर्स, डाक्टरको भिजिट, खाना, म्यानेजमेन्ट भन्दै अन्य शीर्षकमा लाखौं असुल्ने गरिएको छ ।
एक दिन मात्र बेड भर्ना हुँदापनि लाखौँको बील आएको छ । महिनौ अस्पताल बस्नु पर्यो भने जो कोही नेपाली धनाढ्यको घर बाँकी रहला ? पाखामा छाप्रो बनाएर बसेका अधिकांश नेपालीले उपचार पाउलान् ? यो सोचनीय बिषय बनेको छ ।सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै निजी अस्पतालहरूले मनलाग्दी रूपमा बेडको मूल्य तोक्न थालेका छन् । कोभिड–१९ को चपेटामा मुलुक परेको बेला मानवीय संवेदना गुमाई अस्पतालहरुले लुटधन्दा चलाएको तर सरकार मौन बसेको भन्दै जनता आक्रोशित बनेका छन् ।
ह्याम्ससँगै सङ्क्रमितको उपचार गरिरहेका काठमाडौँको सिनामंगलमा रहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) समेतले लाखौं लुटेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ । काठमाडौँ मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड भनिएको छ । तर यो अस्पताल अब पब्लिक लिमिटेड रहेन । यसले एक सूची जारी गरेको छ ।बैशान १९ गते राति ६ बजेदेखि लागू भएको शुल्क दर भनिएको छ । जसमा कोभिड क्याबीन सिंगल बेड प्रति दिन २० हजार, कोभिड क्याबीन डबल बेड १० हजार, कोभिड क्याबीन डिलक्स २५ हजार र कोभिड क्याबीन सुपर डिलक्स ३० हजार तय गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । यो सूची अहिले सर्वत्र भाइरल भइरहेको छ ।
यता सरकारी अस्पतालमा संक्रमितको विजोग छ । बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर आकस्मिक कक्षमा नै संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा अहिले सरकारी अस्पताल जानुस ज्यान घर आउदैन, निजी अस्पताल जानुस आउदा घर रहँदैन स्लोगन एकदम नै मिलेको जस्तो देखिन्छ ।यो खबर आएपछि सरकारले एक्शन लिएको खबर चाँडै प्रकाशन गर्न पाइयोस् । सबै नागरिकले उपचार गर्न सक्नेगरी सर्वसुलभ बनाइयोस् । महामारीका बेला सबैलाई समान गरियोस् । बिरोध र यो मागका लागि यो सामाग्री सक्दो सेयर गरिदिनुहोला ।